Mipiro kuchirongwa cheXfce | Kubva kuLinux
Haisi chakavanzika kunaani zvake kuti chirongwa ichi Xfce Iyo yagara ichitambura nekushomeka maererano nevavandudzi uye zviwanikwa zvakawandisa, ndosaka chikonzero ichi icho kutenderera kwayo kwekutenderera kuchinonoka zvakanyanya kana ichienzaniswa neyeye mamwe maDE. Nezvikonzero izvi zvakagara zviripo maforamu Xfce vakakumbira nzira yekutumira mipiro kuchirongwa; mune imwe yemessage, Nick schermer (musoro webasa) akataura nezvekuti ivo vaishanda pakugadzira hwaro kuti vagone kugamuchira nekuparadzira mari, zvisinei, kunyangwe peji uye vamwe, izvi hazvina kuzopedzisa kupfeka (kubva pane zvatinoziva kusvika parizvino paive nezvipingamupinyi zvakawanda zvehutongi kuti zviitike)
Zvakanaka, mushure menguva yakareba ikozvino zvave kusarudzwa kusarudza imwe sarudzo, anoshanda anovandudza wevaviri Xfce (iye parizvino ari kutarisira shanduko mune yekuratidzira dialog) senhengo ye Xubuntu uye mushandi we Shimmer chirongwa, Simon steinbeiss, Na Eric Kohel, zvakare mugadziri uye ese maviri aripo misoro ye xfce-simba-maneja, vazivisa ku tsamba yekutumira de Xfce Gadzira account mu bountysource yeXfce.
Zvino chii bountysource?
Mumwe wedu lolbimbo akatiudza nezvazvo vhiki yapfuura, asi zvirinani, seiyi shanduro yemahara yeiyo MIBVUNZO ye bountysource:
bountysource ndiyo chikuva chemari cheyakavhurika sosi software. Vashandisi vanogona kunatsiridza akavhurika sosi mapurojekiti avanoda nekugadzira / kuunganidza mibairo uye kuzvipira ku fundraising.
Kune mimwe mibvunzo ine chekuita nekuti ndiani anogona kupa mibairo, riini rinogona kumakwa sekugadziriswa, zvichingodaro, ini ndinokurudzira kuverenga iyo yambotaurwa FAQ.
Zvino, sekutsanangura kwaSimoni mumharidzo yake, kune nzira mbiri dzekupa:
Govera mubairo pane yakasarudzika bug. Iyo yakawanda kwazvo yezvinhu ine yavo yekukanganisa mishumo yakatove yakaverengerwa papuratifomu, uye inogona kusechwa pano.
Tsigira timu ye Xfce kazhinji
Nzvimbo yacho iri kutoshanda uye ine hunhu hunonakidza kwazvo, senge vanhu vakati wandei vanogona kupa mibairo kune imwechete bug semuenzaniso, kana kuti ivo havatore chero chikamu chemari nekuvapa; asi zvakatonyanya kudaro (mune yangu pfungwa zvirinani), iyo iyo chero munhu anokwanisa kupa mubairo pasina kuve chikamu kana kuve nehukama neprojekti. Sezvandambotaura, zvese izvi zvinogona kubvunzwa pane peji.
Chinangwa cheizvi zvese hachisi chekubatsira kubva Xfce asi kumhanyisa kukura kwavo, zvakatonyanya kana vari pane yekutumira tsamba ye xfce-dev yakatogadzirwa runyorwa rwezvikanganiso zvakakomba kusunungura Xfce 4.12.
Saka ndiani anogona kupa kuita kudaro, kana isina chinangwa chakanangana, kuchikwata chese; asi zvokwadi, iwe unogona kunge uchifarira imwe bug, panguva ino semuenzaniso pane zvipo zvekuwedzera chimiro kubudisa pachena senge yedzimwe nharaunda, kana izvo zvinopa kubvarura-xd. Kuparadzirwa kwenhau kwakakoshawo kubatsira, pachezvangu ndinovimba kuti izvi pakupedzisira zvinopa kukurudzira izvo Xfce inoda kwenguva yakareba.
Chekupedzisira, ndinoda kutaura kuti kunyangwe zvipo zvichigona kuitirwa chimwe chinhu, izvi hazvipe chokwadi chekuti vanogadzira vanozofunga kushandira pazviri. Zvinoenderana nemitemo ye bountysource, mubairo unogona kungotorwa chete kuburikidza nemaitiro ekuti mugadziri anopa kodhi uye inosanganisirwa muchirongwa uye vese vanopa vanovhota kuti vaigamuchire. Nekudaro, zvinogona kuitika kuti mubairo mubug kana chimwe chinhu chiripo asi hapana munhu anofarira kushanda pairi, kunyange zvisingaite.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Noticias » Mipiro kune Xfce chirongwa
Zvakanaka izvo. Ndakafarira Xfce zvakanyanya pamberi, asi chokwadi ndechekuti ine zvipembenene zvinoverengeka uye zvinoshayikwa zvimwe zvinhu, izvo zvinoita kuti ndisarudze KDE kana Cinnamon kunyangwe pa netbook.
XBD hupenyu munzira akadaro
Zvakanaka, zvinonzwika zvakaoma kwazvo kwandiri, nekuti ivo chete havaise bhatani repalipi uye vanogamuchira zvipo, ini ndaizozvipa uye nemufaro mukuru. e yakapa kune imwe yemahara software pamapurojekiti avo. Pfungwa yacho inoita senge yakanaka kwandiri, asi ini ndinoiona yakaoma. mumaonero angu semupi. Mufaro
Pindura kune XBD hupenyu mune dhizaini
Ini handioni kuomarara, mipiro inogona kuitwa neGoogle Walet, BitCoin uye Paypal inosanganisirwa nekungowana peji rezvirongwa apa https://www.bountysource.com/teams/xfce uye sarudza kukosha kwekupa kuruboshwe.
Ini ndaishandisa XFCE kusvika iyo yekupedzisira vhezheni kwavakaisa iyo Whisker uye ivo vakawedzera iko kwekutanga kushandiswa ne50MB. Nezvo, ndakadzokera kuLXDE (iyo inozopedzisira yatumirwa kuQT) uye ini ndinoshandisa zvisina musoro pandinotanga uye neOpenBox iyo inobhururuka mumushini wangu wekare.
Zvinonyadzisa nekuti ini ndaida XFCE. Ndinovimba vanowana mari uye voivandudza; uku ndichitoona zvichindiomera kuti ndibude mundege iyi inonzi LXDE.
Iyo whisker menyu inogona kubviswa zviri nyore uye kuisa iyo yekutanga Xfce menyu. Ini handifunge kunyangwe ivo Xfce vanogadzira vakazviita, mumwe munhu akazviita uye mamwe ma distros akatadza kushanduro yavo neXfce. Unofanira kuverenga zvakawanda.
Sezvavakataura kwauri, Whisker Menyu haisi chikamu chepamutemo cheXfce, chirongwa chakazvimiririra uye icho Xubuntu chakawedzera (pamwe nezvimwe zvinogoverwa), ndinodemba toni yekucheka asi usavhiringidze Xfce neXubuntu. Zvakare zvakareruka sekubvisa iyo nemaneja wepakeji wekugovera kwako; apt-tora kana iri Debian / Ubuntu, pacman kana iri Arch / Manjaro, Urpm kana iri Mageia kana yum kana iri Fedora.
Zvakanaka, zvakanaka, ngatione. Kukanganisa kwangu. Kwete kuti yaishandisa XFCE zvakananga asi Xubuntu. Uye Xubuntu akaisa iyo Whisker mairi. Uye ndiani anoziva zvimwe kunze kwekushandisa yakakwira kupfuura 50MB. Sezvo muchina wangu wakura kwazvo ndakafunga kutora nhanho kumashure ndokumisikidza Lubuntu. Mukupedzisira yaive yakawanda yedanho kumberi nekuti OpenBox inoshamisa chishamiso.
Ndinovimba ndazvitsanangura zvirinani izvozvi 🙂
Ichokwadi ndechekuti handina kumbobvira ndanzwisisa kuti sei kuisa Whisker kana XFCE (uye panguva ino ndinoreva XFCE) yatove nechimwe chinhu chakafanana kunze kwebhokisi. Ini ndinofunga kuti neAlt + F3 yakaitwa.
PS: Ehe, ini ndaigona kutora iyo Whisker nezvose izvo, asi ini ndingadai ndisina kumbobvira ndawana yakaderera kudyiwa kweRAM yeLubuntu.
Whisker paDebian Jessie haawedzere kushandiswa ne50 MB (kana nehafu), inofanira kunge iri imwe Xubuntu yekuwedzera iyo inozviita ...
Sei mumwe munhu achienda kualt + f3 kunotsvaga chimwe chinhu, kana ivo vachigona kungoisa yavo yekushandisa menyu uye kutsvaga chero chavanoda, uyezve vaine zvavanofarira munzvimbo imwechete uye mamwe mapfupi mapfupi?
Dhinda Alt + F3 uye iwe uchaona zvaunowana. Kune avo vanoshandisa PC nekukurumidza nekhibhodi pane pane mbeva. Idzi inzira dziri nyore dzekuita zvinhu. Pamwe Whisker ine nzira pfupi, handiti? Huye, yakasarudzika menyu yeXFCE (iyo isiri iyo Whisker) inobuda yega nekudzvanya mubatanidzwa. Ndinokukoka iwe kuti uzviedze uye iwe uchaona zvandiri kureva. Izvo zvakafanana neWhisker. Uyezve, handizoshamiswa kana musimudziri akafuridzirwa nazvo kugadzira Whisker.
Zvakanaka, ini handichaenderera mberi neiyi tambo zvekare. Sezvineiwo, zvisinei nekuti ndinonyora sei, handikwanise kuzviita kuti ndinzwisisike. Kwaziwai shamwari 🙂
Ini handifunge kuti pane zvakawanda budiriro zvasara zve gtk2, hazvikuvadze. Ini ndinofungidzira kuti munguva pfupi ivo vanozotamira kune gtk3 kana iwe unoziva qt.
Neshanduro 4.10 paive nevatsoropodzi vaasina kubvumirana navo zvekugara muGTK 2. Asi neshanduro 4.12, rinenge gore nehafu kuseri kwechirongwa chayo chekusunungura uye kuchengeta GTK 2… Haitaridzike zvakanaka muXfce. Asi hei, kana Debian akaiisa sedhatafesi yedesktop, vanovimba navo, uye ndini wandinoshandisa.
Uye uronga kuronga kusiya gtk2 rini?
Rarama kwenguva refu XFCE !!!!!!!